Ra iisal wasare Rooble oo la kulmay Laamaha Amniga u qaabilsan Doorashada | Dayniile.com
Home Warkii Ra iisal wasare Rooble oo la kulmay Laamaha Amniga u qaabilsan Doorashada
Ra iisal wasare Rooble oo la kulmay Laamaha Amniga u qaabilsan Doorashada
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan xasaasi ah la qaatay Guddiga amniga doorashooyinka oo isugu jira Taliyeyaasha Booliiska heer Fedaraal iyo heer dowlad goboleed, Booliska AMISOM iyo Booliska UNka oo ka taageera dhinacyada farsamada.
Waxaa kulankan looga hadlay u diyaar garowga Sugida Amniga doorashada Xildhibaannada Golaha Shacabka oo dhowaan ka bilaaban doonta qaar ka mid ah magaalooyinka dalka.
Qodobada diirada lagu saaray kulankan waxaa ka mid ah sidii loo xoojin lahaa amniga, ka gudbida caqabadaha jira iyo sida ugu haboon ee dhinacyadan ay u wada shaqeyn karaan.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa uga mahad celiyey guddiga amniga doorashooyinka sidii ay uga qeyb qaateen sugidda amniga doorashooyinkii Aqalka Sare.
Rooble ayaa xusuusiyey xubnaha guddiga musuuliyadda culus ee la saaray in ay ka soo dhalaalaan, maadaama wajiga labaad ee doorashadu uu yahay mid ka culus qeybtii hore.
Waxaa uu kula dardaarmay in ay sii wadaan dadaalkooda wadajirka ah ee ku aadan sugidda ammaanka ergooyinka iyo dhinacyada ku howlan hirgelinta doorashada.
Previous articleMunaafaqnimada Beesha Caalamka waa Dab u dhac Hiru marka Soomaliya
Next articleThe7 — Website and eCommerce Builder for WordPress
Cayaartooyda Degmada Cabdicasiis ayaa u soo baxday afar- dhammaadka Tartanka kubbadda Gacanta Degmooyinka iyo Deegaannada Gobolka Banaadir 2021. Cayaartooyda Degmada Cabdicasiis oo labadii tartan ee...
Kulan xasaasi ah oo dhuusamareeb uga socda maamulka Galmudug